Ahoana no ahafantarana raha fitiavana na fisakaizana ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
3 Famakiana Min
Ahoana no ahafantarana raha fitiavana na fisakaizana. Ara-dalàna ny mahatsapa fisafotofotoana rehefa ao anatin'io malaza io isika «faritry ny mpinamana«. Manontany tena ianao hoe: Ahoana no ahafantaranao raha finamanana fotsiny ilay izy na zavatra hafa? Tianao ho fantatra ve raha tena ao anatin'ny faritry ny fisakaizana ianao sa misy lolo ao an-kibony koa ilay olona tianao rehefa mijery anao? Mba hahazoana antoka, vakio ity lahatsoratra ity ho an'ny toro-hevitra sy hahitana famantarana an-kolaka momba ny fahalianan'ny lehilahy.
1 Ahoana no ahafantarana raha fitiavana na fisakaizana amin'ny alalan'ny famantarana sasany
1.1 1. Lazainy aminao ny zava-drehetra
1.2 2. Miresaha momba ny olon-kafa
1.3 3. Omeny anaram-bositra ianao
1.4 4. Soroka hitomany ihany ianao
1.5 5. Mitebiteby eo anilanao
1.6 6. Miezaha hanao toy ny Cupid
1.7 7. Fifandraisana amin'ny vatana
Ahoana no ahafantarana raha fitiavana na fisakaizana amin'ny alalan'ny famantarana sasany
Fantaro raha fitiavana na fisakaizana amin'ny alalan'ny famantarana
Mazava ho azy fa samy hafa ny tranga tsirairay. Tsy mitovy ny fihetsiky ny olona ary hafa koa ny fitondran-tenany. Na izany aza, na eo aza izany dia azo atao izany fantaro ny famantarana sasany hahafantarana raha misy zavatra hafa sa finamanana mahafinaritra fotsiny.
Zava-dehibe ny hazavaina fa tsy misy ilàna azy ny lasa paranoïde ary mieritreritra fa famantarana ny antsipiriany rehetra: ny simia sy ny firindrana eo aminareo dia sarobidy lavitra noho ny boky na torolalana rehetra. Na izany aza, dia tsara foana ny manondro ny teboka sasany izay misongadina amin'ny olona rehetra rehefa liana amin'ny olona iray izy ireo.
1. Lazainy aminao ny zava-drehetra
Eritrereto foana hoe: ianao ve ilay namanao iresahana rehefa misy olana? Angamba ianao tena ao anatin'ny faritry ny fisakaizana. Rehefa mifamaly ny fitia dia misy a rivotry ny mistery sy ny fihetseham-po. Ka raha foana zarao tanteraka izay rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao Miaraka aminao, tsy manao ezaka na kely aza izy mba hampiaiky volana anao na hamorona izany toe-tsaina miandrandra izany. Tena mety ho namana ihany no mahita anao.
2. Miresaha momba ny olon-kafa
Rehefa manontany tena ianao hoe: Ahoana no ahafantaranao raha finamanana fotsiny ilay izy na zavatra hafa? Ity angamba no famantarana mazava indrindra fa misy olona mihevitra anao ho namana. Raha manomboka miresaka momba ny fitiavana olon-kafa izy, dia tena ao anatin'ny faritry ny fisakaizana ianao. Toy izany koa rehefa mangataka torohevitra feno fitiavana aminao izy, nefa tsy mieritreritra akory hoe mety ho liana aminy ianao.
3. Omeny anaram-bositra ianao
Raha izy no karazana izay miantso anao amin'ny anaram-bositra mahafatifaty toy ny "rahavavy na rahalahy", mety tsy ho tsapanao izany fientanam-po mahery vaika izany ho an'ny hoavy. Tsy midika akory izany fa tsy afaka mahita anao amin'ny maso feno fitiavana ny ankizilahy na ankizivavy, fa amin'izao fotoana izao dia namana fotsiny ianao.
4. Soroka hitomany ihany ianao
Fampitandremana iray hafa fa anisan'ny faritra mpinamana ianao dia rehefa mitodika aminao ilay olona rehefa tapitra ny fifandraisana hafa. Saintsaino ireo toe-javatra ireo, satria mety ho izany aoka ho soroka sariaka hitomany amin'ny toe-javatra sarotra zakaina.
5. Mitebiteby eo anilanao
Izany dia famantarana iray hafa mampiavaka ny faritra fisakaizana. Rehefa romantika ilay fihetseham-po dia matetika ny olona no mitebiteby. Raha toa tsy milamina izy, manomboka mihomehy amin'ny zavatra tsy mampihomehy, na manandrana manaitra anao amin'ny fomba iray, dia famantarana izany fa angamba mihoatra noho ny namana izany fitiavana izany. Amin'ny fifandraisana sariaka, ilay olona dia tsy miezaka ny hanaitra na hampifaly olona iray hafa.
Famantarana mahazatra hafa momba ny fisakaizana dia rehefa miteny zavatra tsy misy fanahiana na dia kely aza ny amin’ny fihetsikao amin’izay lazainy, izany hoe tsy misy ahiahy ny amin’izay ho fihetsikao.
6. Miezaha hanao toy ny Cupid
Ahoana no ahafantaranao raha finamanana fotsiny ilay izy na zavatra hafa? Tsotra io famantarana io! Miresaka olona mifanaraka aminao ve ianao? Efa nanandrana nampiaraka olon-kafa ve ianao? Famantarana fampitandremana iray hafa. Noho izany, tandremo hatrany izany tsipiriany izany, na ny ratsy kokoa aza, raha rehefa mivoaka ianao dia maka namana satria heverinao fa afaka manao ny lalao tonga lafatra ianao.
7. Fifandraisana amin'ny vatana
Rehefa mifamaly ilay feeling dia normal mitady safosafo sy fifandraisana ara-batanaNa amin’ny lalao izany na ho fialan-tsiny hifampikasokasoka. Raha tsy mitranga aminao mihitsy izany, na dia misy aza ny fahafahana, dia satria tsy mikasa ny hihazona fifandraisana ara-batana manokana kokoa izy.
Ny fitenin'ny vatana dia milaza zavatra betsaka momba ny olona iray, saingy mila mitandrina ianao. Mitandrema tsara foana mba tsy hieritreritra fa ny zavatra rehetra ataon'ny tovovavy amin'ny vatany dia mariky ny fahalianana satria mety ho lasa paranoïde ianao ary mahita famantarana izay tsy misy na inona na inona.
ENTANA NOVOKARINA To learn MAIMA VE Very lanja | FAHASALAMANA zava-pisotro Malagasy FAHASALAMANA Ahoana no Dios isan-karazany farany andian-teny angano Matematika Ny nofiko vavaka Popular Fivavahana Santos No Category nofy hantsaka Tarot WhatsApp